रियल एस्टेट प्रीमियम विज्ञापन विकल्प रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू - रियल एस्टेट ब्लग - रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू:
रियल एस्टेट प्रीमियम विज्ञापन विकल्पहरू realtyWW मा
जुलाई 15, 2016 by realtyWW, कुल अवलोकन:
हामी केहि भुक्तान गरिएका सेवाहरू पनि प्रदान गर्दैछौं वर्गीकृतमा प्रीमियम विज्ञापन र सूची सिन्डिकेशन हाम्रो वेबसाइट मा.
सूचीकरण सिन्डिकेशन। यदि तपाइँसँग एक रियल इस्टेट वेबसाइट छ र तपाइँ तपाइँको सूचि स्वचालित रूपमा रियल्टीडब्ल्यूडब्ल्यू र हाम्रो मा पुन: प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ साझेदार वेबसाइटहरु यो विकल्प तपाइँको लागि हो! केवल लागि 30.00 USD मासिक हाम्रो प्रणाली तपाइँको रियल्टीडब्ल्यूडब्ल्यू खाता मा नयाँ विज्ञापनहरू आयात प्रत्येक दिन तपाइँको xML फिड जाँच गर्दछ। यो विकल्प केवल रियल इस्टेट प्रोफेशनलहरूको लागि उपलब्ध छ (पोर्टलहरू, एग्रीगेटरहरू, वर्गीकृत वेबसाइटहरू आदिको लागि होईन)। लिस्टि sy सिंडिकेशन सुविधा हाम्रो सदस्यता योजना को कुनै संग सित्तैमा आउँछ यहाँ फेला पार्न सकिन्छ। थप विवरण यहाँ फेला पार्न सकिन्छ
सूचीबद्ध प्रकाशन मूल्य चयनित कोटी र प्रयोगकर्ताहरूमा निर्भर हुन सक्छ सदस्यता योजना, तर यो प्रायः केसहरूमा स्वतन्त्र हुन्छ।
प्रीमियम स्थिति जब विज्ञापनहरू प्रीमियम मार्कको साथ लेबल गरिन्छ र खोजी परिणामहरूमा नि: शुल्क विज्ञापनहरू भन्दा उच्च देखिन्छ। यसले बढि छिटो बिक्रीलाई बढवा दिन्छ। विकल्पको अवधि हुन सक्छ. तपाइँको विज्ञापन प्रीमियम बनाउनको लागि, यो एक शुल्क तिर्न आवश्यक छ। यस विकल्पको लागि हालको शुल्क हो: 1.00 USD प्रति 24 घण्टा। चेकआउट गर्न थिच्नुहोस्
अतिथि पोष्ट मध्यस्थता। दर्ता नगरिएका लेखकहरूले सानो साना मोड शुल्क तिर्नु पर्छ - 30.00 USD । तपाईं पहिलो पोस्ट प्रकाशित पछि मात्र दर्ता लेखक हुन सक्नुहुन्छ। चेकआउट गर्न थिच्नुहोस्
यो प्रविष्टि मा पोस्ट घर जग्गा विज्ञापन। बुकमार्क को Permalink.